I-Apple Watch - I-Apple Watch | Ngivela kwa-mac
Ekugcineni ngemuva ubude obubili kuyaiminyaka egcwele amahemuhemu kanye nokuqagela mayelana ne-Apple iWatch engaba khona, ku-Keynote yokugcina ngoLwesibili Septhemba 9, 2014 i-Apple isinikeze yona iwashi elihlakaniphile. Leli washi sonke ebesicabanga ukuthi lizobizwa nge-iWatch ngenxa yamalungelo obunikazi amaningi i-Apple enawo ngaleli gama, lagcina selibizwa nge- e I-Apple Watch ukoma.
Umphathi wale nkampani, uTim Cook, wayethula ku-Keynote ngoSepthemba 9, 2014 ngemuva kwenkulumo eyinsumansumane ayenza yaduma kakhulu enkampanini uqobo lwayo ngenkathi uSteve Jobs ongasekho eyikhulume ku «Into eyodwa futhi ...» Le nto eyodwa eyengeziwe ngeyokuqala nguTim Cook emlandweni wakhe njenge-CEO ye-Apple futhi akazange ayeke ukukhuthaza umphakathi olindelwe ukuthi ulalele futhi abakuthandayo kakhulu.
Izinhlobo ze-Apple Watch ze-3
I-Apple yethula le Washi entsha ekujabuliseni umphakathi wayo futhi yethulwe isibindi amamodeli amathathu ahlukene nosayizi ababiliiminyaka ehlukene izihlakala zabesilisa nabesifazane. Imodeli ye- insimbi, imodeli yezemidlalo ye- i-aluminium nolunye ucingo Edition de I-karat 18 yegolide.
Ngale ndlela, i-Apple iqeda ukuqagela namahemuhemu ngokwethula lokho okubizwa ngokuthi yi umngane ophelele kumadivayisi wakho we-iOS futhi ikakhulukazi i-iPhone.
Ku-M ngivela kwa-Mac uzothola lonke ulwazi kokugqokwa kokuqala kwenkampani ye-apula elilunyiwe kusukela ngosuku lokuqala lokwethulwa kwalo. Jabulela i- I-Apple Watch nazo zonke izindaba zakho nathi.
UGurman akanathemba ngenzwa yokushisa ye-Apple Watch Series 8
Por UJordi Gimenez kwenza Isonto eli-1 .
Amahemuhemu ayeza futhi adlule njengoba umoya uvunguza futhi lokho emasontweni ambalwa edlule bekungaphezu kwalokho okungenzeka manje ...
Isimemezelo somthelela se-Apple Watch
Por UJordi Gimenez kwenza Amaviki angu-3 .
Kwesinye isikhathi ucingo oluya kwabezimo eziphuthumayo ngesikhathi esifanele lungasindisa izimpilo zethu futhi lokhu ...
Izinkinga zokushaja nge-Apple Watch kanye ne-watchOS 8.3
Abanye abasebenzisi be-Apple Watch Series 7 bahlangabezana nezinkinga zokushaja ngemuva kokuthuthukiswa ngemuva kokuthuthukela ku ...
Yenza kube ngokwakho i-Apple Watch yakho ngalezi zithombe zangemuva ze-X-ray
Ekuqaleni kuka-Okthoba, abafana bakwa-iFixit babelane ngokuhlaziywa kwabo kwendabuko kwe-Apple Watch Series 7 entsha ehlakazwa ...
Bafaka icala ngokumelene ne-Apple bethi i-Apple Watch ingadala ukulimala ngokomzimba
Por UToni Cortes kwenza Inyanga e-1 .
Uma sengeza ukukhululeka abanye ababa nakho ekumangaleleni izinkampani ezinkulu nganoma yisiphi isizathu sokwenza inzuzo, ...
Inguqulo ye-WatchOS engu-8.3 Yokukhululwa Yengeza i-AssistiveTouch kumamodeli amadala we-Apple Watch
Por UJordi Gimenez kwenza Inyanga e-1 .
Enye yezinto ezintsha eziyinhloko zenguqulo entsha ye-watchOS 8.3 Release Candidate ukuthi yengeza umsebenzi we-AssistiveTouch ...
Uyayibona i-Apple yethula iwashi lohlobo lwe-G-Shock okungenzeka?
Enye yamahemuhemu esinawo engqondweni ekubikezelweni kwakamuva kukaMark Gurman ukuthi inkampani yeCupertino ...
Amahemuhemu amasha mayelana ne-Apple Watch "G-SHOCK"
Por UToni Cortes kwenza Izinyanga ze-2 .
Bengilokhu ngimangazwe amawashi omkhiqizo we-Casio. Njengoba ngibe neyokuqala ene-calculator, ngesikhathi sami ...
Usaziwayo Omusha ku-Apple Fitness + 'Isikhathi Sokuhamba': UPrince William
Por UManuel Alonso kwenza Izinyanga ze-2 .
Indlela i-Apple ethole ngayo ukukukhuthaza ukuthi uhambe kahle ibizwa ngokuthi "Isikhathi Sokuhamba." Ukufaneleka +...
Imanuwali nayo yonke imikhakha ye-Apple Watch
Uyazi ukuthi kukhona imanuwali lapho ungabona khona imisebenzi yezinhlaka zakho...
I-Apple Watch isiyithuluzi elingcono kakhulu lokuqapha ukusebenza ngokomzimba nezemidlalo kwabasebenzisi….
Isixazululo uma i-Apple Watch yakho ingakutsheli isikhathi esikhulunywe noMinnie noMickey
Isizukulwane sokuqala i-Apple Watch kanye nochungechunge 1 akufani
Funda ukuthi ungalanda kanjani futhi ufake izinhlelo ku-Apple Watch yakho